UNITED WE STAND, divided we FALL. ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ မွတ်​စ်​လင်​မ်​ အရင်​ကလည်း ဘာပြသနာမှ မရှိခဲ့ဘူး။ ခုလည်း မရှိဘူး။ အ​သေးအဖွဲ ​လျှော်​ပစ်​လို့ရတာကို မီးထိုးပြသနာရှာတဲ့​ အစိမ်းကောင်​​တွေ ရှိမှာပဲ။ လက်​တွဲထားစမ်းပါ။ | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeUNITED WE STAND, divided we FALL. ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ မွတ်​စ်​လင်​မ်​ အရင်​ကလည်း ဘာပြသနာမှ မရှိခဲ့ဘူး။ ခုလည်း မရှိဘူး။ အ​သေးအဖွဲ ​လျှော်​ပစ်​လို့ရတာကို မီးထိုးပြသနာရှာတဲ့​ အစိမ်းကောင်​​တွေ ရှိမှာပဲ။ လက်​တွဲထားစမ်းပါ။
UNITED WE STAND, divided we FALL. ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ မွတ်​စ်​လင်​မ်​ အရင်​ကလည်း ဘာပြသနာမှ မရှိခဲ့ဘူး။ ခုလည်း မရှိဘူး။ အ​သေးအဖွဲ ​လျှော်​ပစ်​လို့ရတာကို မီးထိုးပြသနာရှာတဲ့​ အစိမ်းကောင်​​တွေ ရှိမှာပဲ။ လက်​တွဲထားစမ်းပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ မွတ်စ်လင်မ် အရင်ကလည်း ဘာပြသနာမှ မရှိခဲ့ဘူး။ ခုလည်း မရှိဘူး။
အသေးအဖွဲ လျှော်ပစ်လို့ရတာကို မီးထိုးပြသနာရှာတဲ့ အစိမ်းကောင်တွေ ရှိမှာပဲ။
၁၉၈၈ ကတည်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တစ်ဦးတည်းကိုပဲ တိုက်နေတာ ဒီနေ့ထိပဲ
ဘာကြောင့်တိုက်သလဲ … လွတ်လပ်မှုကို တောင်းဆိုလို့
ဘာကြောင့် သူ့ကို ပြည်သူတွေ ကြိုက်ကြသလဲ … ဖိနှိပ်မှု လှောင်ချိုင့်ထဲက လွှတ်ပေးနိုင်မလား မျှော်လင့်လို့
ဒေါ်စုကိုမှ သူတို့က ဘာကြောင့် ရွေးတိုက်သလဲ …. လွတ်လပ်မှုကို မပေးချင်လို့ … ဆက်ဖိထားချင်လို့ … လုပ်ချင်တာကို ဆက်လုပ်ရအောင်လို့ …
သူတို့ဖက်က ၁၉၈၈ ကတည်းက တစ်ရက်မှ ပစ်မှတ် မပြောင်းသေးဘူး
နိုင်ငံခြားသားမယား အမည်ကိုကိုင်ပြီး တိုက်တယ်
ကုလားမယား အမည်ကိုင်ပြီး တိုက်တယ်
နိုင်ငံခြားသားသွေးနှောလေးတွေရဲ့ အမေ အမည်ကို ကိုင်ပြီး တိုက်တယ် တိုက်တယ်
ကွန်မြူနစ်အမည်ကို ကိုင်ပြီး တိုက်တယ်
ခုနောက်ပိုင်း မွတ်စုကြည်အမည်ကို ကိုင်ပြီး တိုက်တယ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရခဲ့တဲ့ စွပ်စွဲစော်ကားခံရမှုတွေဟာ အခြားလူတိုင်းထက် မနည်းခဲ့ဘူး၊ တိုက်ရိုက် သွေးသံမထွက်သေးတာပဲ ရှိမယ်။
သူ့ကို တိုက်တဲ့ အဖွဲ့ဟာ အစကတည်းက #တစ်ဖွဲ့တည်း။ ခုရော ပြောင်းသလား … သူတို့ပဲ
ပြည်သူတွေကို မလွတ်လပ်စေချင်တဲ့အဖွဲ့အစည်း၊ ပြည်သူကို ကုပ်သွေးစုပ်နေဆဲ အဖွဲ့အစည်း၊ ပြည်သူကို ကုပ်ခွစီးတဲ့အဖွဲ့အစည်း၊ နိုင်ငံကို ရောင်းစားနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း၊ ပြည်သူကို စာမတတ်အောင် လုပ်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်း၊ မြန်မာအမည်ကို အောက်ဆုံးရောက်အောင် ဆွဲချ တွန်းချခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်း။
ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးကို ၁၉၈၈ ကနေ ဒီနေ့ထိ၊
ခင်ဗျားတို့ ဘိုးဘွားတွေကို ၁၉၆၂ ကတည်းက ဒီနေ့ထိ မလှန်နိုင်အောင် ဖိထားသူတွေဟာ #တစ်ဖွဲ့တည်းပါ။
ပြည်သူတွေ ပေးဆပ်ခဲ့ရတာ သိပ်များနေပြီ။ သွေးတွေ ချွေးတွေ သိပ်များခဲ့ပြီ။
ဗုဒ္ဓ မွတ်စ်လင်မ် ခရစ်ယာန် ဟိန္ဒူ ညီညွတ်ကြပါစို့၊
ဘာသာပေါင်းစုံ လူမျိုးပေါင်းစုံ ညီညွတ်ကြပါစို့
တစ်ယောက်လက်ကို တစ်ယောက် ကိုင်ထားကြပါစို့။ ညီညွတ် ခွင့်လွှတ် ပြုံးပြကြပါစို့
ခင်ဗျားတို့ လွတ်လပ်ချင်သလို ကျုပ်တို့လည်း အတူတူ လွတ်လပ်မှုကို လိုချင်တယ်။
ခင်ဗျားတို့ ဗုဒ္ဓတွေနဲ့ ကျုပ်တို့ မွတ်စ်တွေကြားမှာ သွေးခွဲပစ်နိုင်တာ တစ်ခုတည်း။ ဘာသာရေးအရောင်ဆိုးမှုပဲ။
အာဏာရူးတွေ ဘာသာရေး သွေးထိုးတာကလွဲရင် သူတို့ ဘာမှ မလုပ်တတ်ဘူး။
ဘာသာရေး သွေးထိုးတာကလွဲရင် သူတို့ ဘာမှ မလုပ်တတ်ဘူး။
ဒါကို ခင်ဗျားရော ကျုပ်တို့ပါ ဘာသာရေးသွေးထိုးသွေးခွဲပြသနာရှာနေတာကို ရအောင် ရှောင်နိုင်ရင် ပွဲပြတ်သလောက်ဖြစ်ပြီ။
၄ မတ် ၂၀၁၇
← Song Oo Hlaing ” ငြိမ်းချမ်းစေ…” Peace be upon you Myanmar
Where has our humanity gone in Myanmar? →